FAHAFAHANA avy any COVID-19 any Alemana: Mirongatra ny Duesseldorf Party Mile
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » FAHAFAHANA avy any COVID-19 any Alemana: Mirongatra ny Duesseldorf Party Mile
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Divay & Fanahy
Alemana dia mbola manana tahan'ny aretina COVID-19 avo lenta ary isa ambany ny vaksininy. Na izany aza misy ny fanandramana na aiza na aiza- ary maimaim-poana. Ny tanàna rehetra dia samy manana ny fitsipiny momba ny COVID-19. Jereo ny dikan'izany ho an'i Cologne sy i Duesselorf amin'ity faran'ny herinandro ity.
Ny tanànan'i Duesseldorf any Alemana eo amoron'ny renirano Rhine dia fantatra amin'ny fananana kaontera fisotroana lava indrindra eto an-tany miaraka amina trano fisakafoanana an-jatony any amin'ireo tanàna tranainy feno loko.
Cologne, tanàna misy ny Katedraly malaza 35 kilaometatra fotsiny ary eo amoron'ny renirano Rhine ihany koa dia manana tanàna taloha, fa ny labiera amidy eto dia "Koelsch". Ny labiera ao Duesseldorf dia "Alt"
Na dia tao anatin'ny fotoanan'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina sy ny hidim-piainana aza i Cologne, misokatra i Duesseldorf ary mankalaza ny fahalalahana an'i Corona ny olona - ary hita
Ny sabotsy alina dia nikatona ireo trano fisakafoanana sy fisotroana an'i Cologne, afa-tsy ny famoahana azy.
Ny «curfew» iray dia nanomboka tamin'ny 10 alina ka hatramin'ny 5 maraina isan'andro, ka nahakivy ny fivezivezena ny tanàna, fa ny iray kosa tokony hanaiky ny fetra COVID-19 ao an-tanàna.
Ny tanàna roa, Cologne sy Duesseldorf, dia ao amin'ny State of Northrhine Westphalia any Alemana, fa ankoatry ny fananana labiera Koelsch ao Cologne sy Alt labiera ao Duesseldorf dia mety tsy hitovy amin'ny sabotsy alina
Niala tao Cologne aho tamin'ny 9.30 alina ny asabotsy alina teo ary nanandrana nihoatra ny fetran'ny tanàna alohan'ny 10 alina mba hisorohana ny ora tsy hitsaharana alina. Rehefa avy nitondra fiara nandritra ny 30 minitra aho dia tonga tany Duesseldorf, ary mety tsy ho tafahoatra kokoa ny rivotra iainana.
Nijanona tamin'ny marika Hyatt aho Hotel Wellen ao Duesseldorf miorina eo afovoan'ny tanàna antoko kilometatra ao amin'ny tanàna taloha.
Nandany 45 minitra hafa aho vao nitondra fiara tsy lavitra iray kilaometatra mba hidirana ao amin'ny garazin'ny hotely misy ahy. Fiara, mozika, dihy an'arivony an'arivony ary feno arabe tao an-tanàna no nahatonga ny fanalavirana ara-tsosialy tsy maintsy natao.
Ny sarontava dia tazana tsindraindray fotsiny, ary isaky ny bar, misokatra ny trano fisakafoanana rehetra ho an'ny serivisy ivelany. Feno latabatra hatraiza hatraiza. Ny fepetra ilaina hipetrahana amin'ny toerana iray dia ny fananana fitsapana COVID ratsy na taratasy fanamarinana fanaovana vaksiny feno.
Nahamarika ivon-toeram-pitsapana telo aho, teo amin'ny halaviran'ny fandehanana, tao amin'ny tanàna Old Dusseldorf. Maimaimpoana ny fitsapana ary ny vokatra ratsy dia tokony andrasana ao anatin'ny 15 minitra, manokatra ny kilaometatra fety ho an'ny mpandray vintana.
Androany dia miitatra hatraiza hatraiza ny foibem-panandramana COVID-19 tsy miankina, eny fa na dia any amin'ny trano fisakafoanana aza. Tsy misy fanamarinana sy mizana. Ny foibe dia manery ny governemanta Alemanina EURO 18 isaky ny fitsapana. Hentitra ny lalàna momba ny tsiambaratelo any Alemana. Ny foibem-panadinana COVID-19 tsy miankina dia manome ny isan'ny olona voasedra ihany, tsy mila anarana izany. Miorina amin'ireo isa notaterina dia homena ireo ivon-toeram-panadinana. Azo inoana ankehitriny ny fisolokiana miparitaka. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, ny governemanta dia ampandoavina 3-4 heny noho ny isan'ny fitiliana notanterahina. Tsikaritra ihany koa ny ivon-toeram-panadinana sasany izay tsy nitory fitsapana velively.
Alemanina dia ohatra iray amin'ny fomba hamaritan'ny lalàna mifehy ny tanàna amin'ny fitsangatsanganana an'io firenena io fa tsy azo atao. Ny lalàna dia tsy apetraky ny fanjakana na ny firenena, afa-tsy ny lalàna mifehy ny fahatongavan'ny firenena iraisam-pirenena
Mahaliana ny mahita ny fivoaran'ny aretina COVID-19 ao Duesseldorf ao anatin'ny 14 andro.
Jereo ity horonantsary ity raha hijery ny fijerin'i Duesseldorf omaly, ny asabotsy alina.
Nanambara i Cologne fa nesorina ny fameperana henjana hatramin'ny alatsinainy teo. Ny trano fisakafoanana sy trano fisotroana dia efa miomana amin'ny fahalalahana amin'ny antoko COVID-19.